ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပြန်လည်ရိုက်ကူးသွားမယ့် မိုးဟေကို
''ပပဝတီ စီရင်ခန်း'' မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
မိုးဟေကို က ပရိသတ်အရှေ့ကို ''ပပဝတီ စီရင်ခန်း'' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်. သူမဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေ နားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချော မိုးဟေကို တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဒါရိုက်တာဝိုင်း ရိုက်ကူးမယ့် ''ပပဝတီ စီရင်ခန်း'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်.
''Hello , ၂၀၁၉ ရဲ့ အစမှာတော့ မိုးကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းရိုက်ကူးမယ့် "ပပဝတီစီရင်ခန်း" ဇာတ်ကားလေး ကို ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ ထွန်းထွန်း၊ အလင်းရောင်၊ မိုးနဲ့အတူ ဖွေးဖွေးတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးလေး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ရုံတင်တဲ့ အခါကျမှဘဲ အားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ ၄၃ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေ့ချ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကျဲသွားတဲ့ မိုးဟေကို က တကယ်ကို သမီးလိမ္မာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကောင်းမွန် လိမ္မာတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပြီး ပိုင်ဆိုင်လာတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
''ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်မိဘဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုဝင်ထဲက အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ မိခင်၊ ဖခင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ပြုစုပေးရမှာ ကိုယ့်ရဲ့ တာ ဝန်၊ ဝတ္တရားတောင် မဟုတ်ပဲ စိတ်ကိုက အလိုလို လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကို ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် အမေ့ကို ဦးစားပေးလိုက်တာပါ'' ဆိုတာကိုအမုန်းတွေ ခေါက်ထားလိုက် ရုပ်ရှင်အထူးပြသပွဲမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo: မိုးဟေကို ဖေ့စ်ဘွတ်
မိုးဟေကို က သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးဆိုတာ မိဘပဲ ရှိတယ်လို့ မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာ ရေးကို အဓိက ထားလိုက်ရတာကြောင့် ဇာတ်ကားတွေ သိပ်မရိုက်ဖြစ်တဲ့အပေါ် ပရိသတ်တွေ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
'' မိဘအရေးကြီးဆုံးလေ နော်၊ အမေက မွေးထုတ်ပေးလာလို့ မိုးဟေကို၊ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ မိုးဟေကို ဆိုတာ ဖြစ်လာတာလေ။ အမေ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ချိန်မှာ ကိုယ်က ပစ်ထားလို့မရဘူးလေ။ မိုးရဲ့ ခံယူချက်ပေါ့ ဒါဟာ ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတာ ပရိသတ်တွေလည်း နား လည်ပေးမယ်လို့ ထင်တယ်။ အမေ့ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
မိုးဟေကိုဟာ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တီဗီကြော်ငြာတွေပဲ ရိုက်ကူးနေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ဖြစ်တဲ့ မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေ ဇာတ်ကားကောင်းတွေ ထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိုးထည်ဆိုင်ဘက်မှာ လည်း ဦးဆောင်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုးဟေကို Moe Hay Ko